test otomatiki zvakanakira nekuipira
Kuru Kushandisa Michina Kwayedza Automation Kubatsira uye Kukanganisa
Kwayedza Automation, kana yaitwa nemazvo inogona kuve nezvakanaka zvakawanda uye kubatsira zvakanyanya kuchirongwa uye kurongeka. Kune zvisinei zvakadaro mimwe misungo kana kukanganisa kwe test automation iyo yatinofanirwa kuziva nezvayo.
Kwayedza kushandisa michina Kubatsira
Ndezvipi zvakanakira Test Automation?
Automated macheki inzira huru yekusimbisa kuti iyo application ichiri kushanda nemazvo mushure mekushandurwa kwaitwa kwazviri.
Zvinogoneka kuti kana chinhu chitsva chikawedzerwa kune chishandiso kana bhagi rakagadziriswa, zvinokanganisa mashandiro esoftware inoshanda, kureva kuti regression bug inounzwa.
Nekumhanyisa seti ye otomatiki kudzokorodza cheki kana iko kunyorera kuchinge kwagadziridzwa, tinogona kuona chero nyowani mabhugi akaunzwa nekuda kwekuchinja.
Ruzivo rwakakosha apa nderekumhanyisa otomatiki macheki nguva zhinji iko kunatsiridzwa.
Hapana chikonzero chekumhanya izere seti ye otomatiki macheki. Yekukurumidza hutsi yekudzosera pakiti inofanirwa kukwana kuti utore chero hombe nyaya.
Imwe bhenefiti hombe ye otomatiki macheki ndiyo yekukurumidza mhinduro yatinowana kana iko kunyorera kuchivandudzwa. Sezvineiwo timu yekusimudzira inofanirwa kugadzirisa chero kukundikana painongomuka, isati yaenderera kune mamwe mabasa.
Ndokumbira utarise kuti iyi mhinduro inokurumidza inogona kuwanikwa chete neyeyuniti bvunzo uye API bvunzo. Kana isu tikayedza mashandiro kubva kuUI kana padanho rehurongwa, bvunzo dzinogona kutora nguva yakareba kuti dzipere.
Kurumidza kuuraya cheki
Automated macheki anogona kutora chinguva kunyora. Nekudaro, isu patinovaita ivo vanowanzo kumhanya uye vanogona kuenda kuburikidza nematanho akasiyana nekukurumidza zvakanyanya kupfuura munhu. Naizvozvo, ivo vanobatsira nekupa mhinduro nekukurumidza kune timu yekusimudzira.
Izvi zvinonyanya kuitika mune zvinoitika zve data zvinotyairwa.
Inosunungura nguva yevaedzo
Iko kushandiswa kwakanakisa kwema otomatiki macheki ndiwo ekudzokorora bvunzo.
Kushandura kudzokorodza bvunzo kunotisunungura iyo nguva yevaedzo, kuti vagone kutarisa zvakanyanya pakuongorora kwekuongorora kwezvinhu zvitsva.
Nechiratidzo chimwe chete, kana chikaitwa mushe, otomatiki macheki anogona kumhanya otomatiki aine mashoma kana pasina kutarisa kana kupindira kwemanyorerwo.
Dare rekuvandudza rinogona kubatsira
Otomatiki macheki anowanzo kunyorwa mumutauro mumwechete nechishandiso chiri pasi pekuedzwa. Neichi chikonzero, iro basa rekunyora, kuchengetedza uye kuita bvunzo rinova basa rakagovaniswa.
Wese munhu ari muchikwata chekusimudzira anokwanisa kupa, kwete vaongorori chete.
Kwayedza Automation Zvakaipira
Ndezvipi zvakashata zveTest Automation?
Pfungwa dzenhema dzehunhu
Ngwarira kupasa bvunzo! Izvi zvinonyanya kukosha mukuona mashandiro paUI kana Sisitimu nhanho.
Cheated automated cheki chete inotarisa izvo zvakarongedzwa kutarisa.
Ese otomatiki macheki muyedzo suite anogona kupasa nemufaro, asi panogona kuve nekukanganisa kukuru kusingaonekwe. Icho chikonzero cheichi ndechekuti otomatiki cheki haina kunyorwa kuti 'tsvaga' kune izvo zvinokundikana.
Solution: ita shuwa kuti iwe unogadzira yakanaka bvunzo zviitiko usati wagadzirisa iwo. Cheki yazvino yakangonaka chete sekugadzirwa kwebvunzo. Zadzisa zvakare otomatiki macheki nemawoko / kuongorora kwekuongorora.
Automated macheki anogona kukundikana nekuda kwezvinhu zvakawanda. Kana otomatiki macheki achiramba achikundikana nekuda kwenyaya dzisiri dzechokwadi mabugs, ivo vanogona kusimudza enhema maalarm.
Semuenzaniso, otomatiki macheki anogona kutyoka nekuda kweiyo UI shanduko, sevhisi iri pasi kana matambudziko netiweki.
Idzi nyaya hadzisi dzakananga kubva kuchikumbiro chiri pasi pekuyedzwa asi dzinogona kukanganisa mhedzisiro yema automated cheki.
Solution: Pazvinogoneka / zvinoshanda, shandisa stubs. Stubs dzinokunda nyaya nekubatana kana shanduko mune yechitatu mapato mapato. Naizvozvo, otomatiki macheki aizove akazvimiririra kubva kune chero kwekudzikira kutadza.
Kwayedza Automation haisi kuyedza
Nehurombo, vanhu vazhinji vanokanganisa 'Test Automation' neTesting.
Kana vachinge vaine maturusi ekugadzirisa kuyedza, ivo vanoda 'kushandura bvunzo dzese'. Vanoda kubvisa 'ma test manual' ese.
Chokwadi ndechekuti kuyedza chiitiko chekutsvaga. Kuedzwa kunoda ruzivo rwemasimba, pfungwa yakatarisana uye kuda kudzidza kunyorera.
Kuedza hakusi kungoita seti yematanho ekutanga-akatsanangurwa ebvunzo uye uchienzanisa iwo chaiwo mhedzisiro pamwe nezvinotarisirwa mhedzisiro. Iri ndiro basa re otomatiki macheki.
Kuti unyatso kuyedza kunyorera, huchenjeri hwevanhu hunogara huchifanira.
Solution: Nzwisisa kuti kuti ubudirire kuendesa chirongwa iwe unoda zvese zvoga uye zvemanyorerwo kuyedzwa.
Imwe haisi kutsiva imwe; zadzisa otomatiki macheki nemawoko / kuongorora kwekuongorora.
Nguva Yekuchengetedza uye Kushanda nesimba
Iwe unofanirwa kubvuma chokwadi chekuti otomatiki bvunzo dzinoda kugadziriswa. Sezvo chishandiso chiri pasi pekuedzwa chinoshanduka, saizvozvowo iwo otomatiki macheki.
Automated macheki akapfupika akararama. Kana iwo ekudzosera mapake asina kuchengetedzwa kusvika pari zvino, iwe unotanga kuona ese marudzi ese ekundikana.
Zvimwe mamwe macheki haachashandi. Kana pamwe macheki acho haasi echokwadi anomiririra ekuitwa kutsva.
Kukundikana uku kunogona kusvibisa bvunzo.
Kutanga test otomatiki haisi imwe-yekuedza kuyedza. Kuti uwane zvakanakisa kubva pane otomatiki macheki, ivo vanofanirwa kuchengetedzwa kusvika pari zvino uye zvine chekuita. Izvi, zvinoda yakawanda nguva, simba uye zviwanikwa.
Solution: Nekuti iyo yekuchengetedza chinhu chiitiko chiri kuenderera, isa nguva mukugadzira fomati yakanaka. Shandisa ma module anoshandiswazve, patsanura bvunzo kubva muchimiro uye shandisa maitiro akanaka ekugadzira kudzikisira kuedza kwekuchengetedza.
Zvishoma nezvishoma mhinduro
Kana mashandiro akagadzirira kuyedza, kazhinji yenguva inokurumidza kuita cheki chemanyorerwo.
Dambudziko nderekuti, otomatiki macheki anogona kutora nguva yakareba kunyorera zvichienderana nekuoma kwemuedzo. Naizvozvo, kuita cheki chemanyorerwo kunopa mhinduro nekukurumidza kupfuura kunyora, kumhanya uye kutarisa zvawanikwa.
Zvakare, maererano neUI uye System level kuyedzwa, otomatiki macheki anogona kutora nguva yakareba kuti apedze uye amhan'are. Naizvozvo, kana paine bhagi chaiyo, tinogona kusaziva kusvikira bvunzo dzese dzapera.
Solution: Edza kumisikidza bvunzo padhuze nekusimudzira kuitira kuti kana budiriro yapera, iwe unogona kumhanyisa iwo otomatiki bvunzo kupokana neiyo nyowani mashandiro.
Zvakare, paradzanisa otomatiki macheki mumapakeji akasiyana.
Iyo yeutsi yekudzosera pakiti inofanira kukurumidza kukurumidza. Iyo bvunzo inofanira kungotarisa kuti iko kunyorera kunogona kutanga uye kuwanikwa.
Tevere, iwe unogona kuve unoshanda regression pack iyo inotarisa makuru mashandiro.
Imwe regression pack inogona kusanganisira ese ekupedzisira-kumagumo bvunzo uye neakadzika bvunzo. Aya macheki anogona kumhanyisa husiku.
Muenzaniso wekumhanya kwehusiku ndeye muchinjiko-browser otomatiki macheki. Izvi zvinowanzo kutora nguva yakareba kumhanya pane ese mabhurawuza.
Kwete akawanda madudu akawanikwa
Huzhinji hwetsikidzi dzinoita sedzinowanikwa ne 'tsaona' kana pakuita kuongorora kwekuongorora.
Izvi zvingangodaro nekuti mune yega yega yekuongorora yekuyedza chikamu, tinogona kunge tichiedza kunyorera nenzira dzakasiyana.
Automated regression cheki kune rimwe divi, gara uchitevera nzira yakapihwa. Dzimwe nguva neyakafanana seti yeyedzo data. Izvi zvinoderedza mukana wekutsvaga zvitsva mukushandisa.
Zvakare iyo nhamba yekudzosera mabugs anoita kunge akaderera pane nyowani-chimiro mabugs.
Solution: Edza kuvaka zvisina kujairika mune mamiriro uye data. Kuedza nzira dzakasiyana nedata rakasiyana nguva dzese kunogona kuratidza zvinogona kuitika.
Mune ino posvo, isu takatarisa zvimwe zvezvakanakira nekuipira kwekuyedza kuyedza. Kana isu tichinge tabatanidzwa mukugadzira otomatiki bvunzo, isu tinofanirwa kufunga nezve pamusoro mapoinzi kuti tibatsirwe zvakanyanya.
s10e vs s10 hupenyu hwebhatiri
Apple Tarisa kurara kwekutevera kuri pano! Aya ndiwo mashandiro awo
5 smart yakabatana BP kumonitor monitors ayo anobatana neApple uye iOS zvishandiso
T-Mobile vatengi vanogona ikozvino kuwedzera inishuwarenzi pazvinhu zvakabhadharwa mari
AT & T inotangisa AT & T Navigator
Samsung Galaxy Tab S4 yakagadzirira kuvhurwa padhuze neBhuku Rinovhara Khibhodi
Apple inogona kushandisa AirPods kuteedzera data rehutano
Samsung yakamhan'arira pamusoro pekuputika kwefoni uye iyo & apos; kwete iyo Galaxy Note 7